‘पो’र्न स्टार’ भनेपछि नायिका उर्मिला रिसाइन्, दिइन् कंगनालाई यस्तो जवाफ « Etajakhabar
‘पो’र्न स्टार’ भनेपछि नायिका उर्मिला रिसाइन्, दिइन् कंगनालाई यस्तो जवाफ
प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०७७, शुक्रबार ११:२०
काठमाण्डौं । भारतीय मिडियामा अहिले दुई कुराको मात्र चर्चा हुन्छ । एक रिया चक्रवर्ती र अर्को कंगना रनावत । रियाको चर्चा सुशान्तकी पूर्व प्रेमिका भएको कारण हुने गरेको छ भने कंगनाको चर्चा सबै कुराको बिरोध गर्दै हिडेका कारण ।
बलिउड नायिका कंगना रनावतले हुनेपनि भारतीय फिल्म इन्डष्ट्रिमा लगभग सबै कलाकारलाई केही न केही भनिरहेकी छिन् । पछिल्लो समय उनले अर्की नायिका उर्मिला मातोंडकरलाई ‘सफ्ट पो’र्न स्टार’ भनेकी छिन् ।
सन् ९० को दशककी चर्चित नायिका उर्मिलाले एक् से एक चर्चिच फिल्म दिएकी छिन् । त्यस ताकाका फिल्ममा उनको बो’ल्ड सिनको अझै चर्चा हुने गर्छ । यस्ती नायिकालाई कंगनाले एक समाचार च्यानलसँग अन्तरवार्ता दिने क्रममा सफ्ट पो’र्न स्टार भएको र अभिनयको कारण भन्दा यस्तै कारण चर्चित भएको बताइन् ।
यता उर्मिला मातोंडकरले कंगना रनावतमाथि निुशाुना साँध्दै कंगनाले बिना कारण जे पायो त्यही बोलेर भ्रुम छरिरहेको बताइन् । उर्मिला मातोंडकरमाथि कंगनाको यस्तो बयानपछि थुप्रै बलिउड कलाकारले कंगनालाई नै नराम्रो भनिरहेका छन् । लगभग सबैजसो कलाकार उर्मिलाको समर्थनमा उत्रिएका छन् ।
उर्मिलाले एक अन्तरवार्तामा भनेकी छन्, ‘कंगनाले ती मानिसहरुको नाम लिउन् जसले इन्डष्ट्रिमा नुशा लिन्छन् । यदि कंगनाले यस्तो गर्छिन् भने उनको यो जानकारीका लागि थम्स अप दिने पहिलो महिला हुनेछु ।’
उर्मिला थप्छिन्, ‘तिमीसँग आज जे छ नि, नाम दाम, यी सबका लागि तिमीले मुम्बई र फिल्म इन्डष्ट्रिलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ । तिमीले पहिले नै यस्ता विषय किन उठान गरिनौ ? पछिल्लो केही महिनादेखि मात्रै तिमीले यी सबै किन बोलिरहेकी छौ ? समय निकै उदेक लाग्दो लागिरहेको छ । परिस्थिती पनि अचम्मको लागिरहेको छ ।’
प्रियङ्काले लेखिन् आफ्नो आत्मकथाः जस्मा समेटिएको छ बरेलीको बस्तीदेखि हलिउडसम्मको यात्रा
७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ११:०१